> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Podcast ka iPhone in Lugood
Aan lahaa qaar ka mid ah Podcasts cajiib on my PC iyo sidoo kale waxaan iyaga synced si iPhone. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan faylasha on Lugood aan laga badiyay ka dib markii aan ku rakiban aan PC sababtoo ah waxaa la burburtay. Ma jiraan hab lagu Podcasts ka iPhone wareejiyo Lugood? Waxa ay u muuqataa Lugood waxba kama qaban karto. Fikrad kasta?
Waa mid aad u fudud in ay Podcasts ka Lugood wareejiyo iPhone, laakiin ma ahan kiiska la podcast ka iPhone gudbaayo Lugood dib. Lugood marnaba kuu ogolaanaysaa inaad Podcasts ka iPhone wareejiyo Lugood, maxaa yeelay, ma aha hubin in Podcasts aad iPhone leeyihiin nuqul arrimaha sax ah ama aan. Nasiib wanaag, weli waxaa jiro qaar ka mid ah workarounds si hagaagsan Podcasts ka iPhone in Lugood. Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jeedinaynaa inaad isku daydo Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) si ay u gudbiyaan video iyo maqal ah Podcasts ka iPhone in Lugood.
Download Podcasts iPhone qalab kala iibsiga si hagaagsan Podcasts ka iPhone in Lugood!
Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) waa qalab kala iibsiga iPhone xirfadeed. Waxay kaa caawin in aad Podcasts ka iPhone wareejiyo Lugood si fudud oo si deg deg ah. Halkan waxaan la hadli sida loo Podcasts ka iPhone wareejiyo Lugood leh TunesGo Wondershare. Haddii aad tahay qof user Mac ah, isku day Wondershare TunesGo (Mac). Tallaabooyinka ku dhowaad isku mid yihiin.
Orod Wondershare TunesGo iyo isticmaali iPhone USB cable in ay ku xidhmaan aad iPhone aad PC. Wondershare TunesGo ogaan doonaa iPhone iyo muujiyaan ay info uu furmo suuqa hoose. Codsiga iPhone Tani waxay si fiican u shaqeeyaa PC Windows.
Tallaabada 2. Transfer Podcasts ka iPhone in Lugood
In uu furmo suuqa hoose, guji "Media". Markaas uu furmo suuqa Warbaahinta, dusheeda, aad arki doonaa "Podcasts". Waxaa Riix in uu soo bandhigo oo dhan Podcasts aad iPhone. Ka dib markaas, waxaad arki doonaa oo dhan Podcasts aad iPhone halkan soo bandhigay. Dooro kuwa doonayay, guji saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in". In liiska jiido-hoos, doortaan "Dhoofinta in Lugood Library."
Taasi waa! In labaad ah, oo aad arki doonaa in dhammaan Podcasts wareejiyo ka iPhone in Lugood Library on PC. Haddii aad jeceshahay, waxaad sidoo kale dhoofin karo iPhone Podcast si aad u computer. Iyadoo TunesGo Wondershare, waxaad tahay in ay la wareegaan Podcasts ka PC si iPhone iyo sidoo awoodaan.
Isku day TunesGo Wondershare si ay u gudbiyaan iPhone Podcasts in Lugood!
Daawo Video ah in ay bartaan sida ay u gudbiyaan Podcast ka iPhone in Lugood
Watch Video in ay bartaan sida ay u gudbiyaan Podcast ka iPhone in Lugood